थाइरोइड र मधुमेहको यसरी गरौ उपचार । | गोसाइकुण्ड स्वास्थ्य सेवा केन्द्र प्रा.लि
गोसाइकुण्ड स्वास्थ्य सेवा केन्द्र प्रा.लि
थाइरोइड र मधुमेहको यसरी गरौ उपचार ।
डा दिपेन्द्र कार्की
थाइरोइडतथामधुमेह रोग विशेषज्ञ,
गोसाइकुण्ड स्वास्थ्य सेवा केन्द्र
पछिल्ला बर्षहरुमा नेपालमाथाइरोइड तथामधुमेहका रोगीहरु दिनप्रतिदिन बढेका देखिन्छन् । पहिले–पहिले उचित परीक्षण नभएर र जनता स्वास्थ्यप्रति सचेत नभएकाकारण अस्पतालहरुमा यी रोगीहरु आउननसकेपनिहिजोआजभने यस्ता रोगीहरुको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । थाइरोइड र मधुमेह रोगले दिर्घकालमामानिवजिवनलाई धेरैथरी असर पु¥याउने कारणयी रोग प्रति सचेतनाबढ्दै गएको रोग सम्बद्धवीज्ञहरु बताउँछन् ।
के हो थाइरोइड ?
गोसाइकुण्ड स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमाकार्यरत डा दिपेन्द्र कार्की भन्छन् घाँटीको अघाडी पट्टी मुनीतिर एउटा ग्रन्थी हुन्छथाइरोइड ग्लाल्न्ट त्यसले हर्मोन बनाउँछ । टीथ्रीर टीफोर भन्ने त्यो हर्मोनले शरीरको एक्टिभिटिजहरुलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ । त्यो हर्मोन गन्थ्रीले कहिले–काँहीकमवा बढी बनाउने दुइप्रकारको समस्या हुन्छ । उनी भन्छन् जस्तो टि थ्रि र टि फोर भन्ने हर्मोन कमबनायो भने त्यसलाई हाइपो थाइरोडिजम भनिन्छ ।
डा दिपेन्द्रकाअनुसार अर्कोमाचाँही टि थ्रि र टि फोर भन्ने हर्मोन बढी उत्पादन हुन्छ । त्यसलाई हाइपर थाइराइडीजम भनिन्छ । उनकाअनुभवअनुसार नेपालको सन्र्दभमा धेरै जसो कमअर्थात हाइपो थाइरोडिजम देखिएको छ । ग्लान्टले कमहर्मोन प्रोडक्सन गर्ने अवस्था देखिएको छ ।
किन हुन्छ थाइरोइड ?
थाइरोइडहुने विविधकारण रहेको डा दिपेन्द्रको अनुभव छ । भन्छन् पहिलापहिलाआयोडिनको कमीले यो देखिन्छ भन्ने थियो । तर आजकल सबैले आयोडिन युक्तखाना नै खान्छन् खाँदापनिकिन हुन्छ त त्यो ?रिसर्च हुननसकेको उनी बताउँछन । उनी भन्छन हाम्रो जस्तो देशमा धेरै जस्तो अवस्थामाहाम्रै शरीरलेत्यो एन्टीवडीहरु बनेर थाइरोइड ग्लान्टलाई डिष्ट्रयाइ बनाएर हर्मोन बनेको होकीभन्ने देखिन्छ । तर कारण यहीहो भन्नचाँहीगा्रह्रो छ । तरपनिअहिलेको अवस्थामाविभिन्न केमीकलयुक्तखानपानपनि एउटा कारण हुनसक्छ ।
डा दिपेन्द्र भन्छन्थाइरोइडको लक्ष्यणहरु देखियो भने हामी टेष्टहरु गराउँछौ । त्यसमाहाइपो वाहाइपर थाइराइड भएको देखियो भने हाइपो थाइरोइडीजमको उपचार भनेको थाइरोइड सप्लीमेन्ट गर्ने हो । सरलमाभन्दाथाइरोइड हर्मोन जुनग्रन्थीले बनाउनु पर्ने हो त्यही नै ट्याप्लेटको रुपमाथाइराइड हर्मोन दिने हो । भन्छन् ‘त्यो जुन शरीरले बनाउनु पर्नेहो त्यही दिन्छौ’ । जसमाविभिन्न चरणहरु हुने उनीबताउँछन ।१२.५ देखिलिएर १०० भन्दाबढी पनि हुन्छ । डा दिपेन्द्र भन्छन् ‘जस्तो टेष्ट लिँदाकत्तिको सिभियर छ रोग त्यो अनुसार डोज मिलाएर दिने गर्छौ हाइपोको लागि’ ।
त्यसैगरी हाइपर थाइरोइड दुइप्रकारलेहुने उनी बताउँछन । एउटा ग्लान्टलाईचोट परेर भएको जुन स्टोक थियो त्यो धेरै फालेर हुन्छ । अर्को ग्लान्टलाई नै बढी सक्रियपारेर उपचार गराइन्छ । उनी भन्छन ‘यदीत्यो नष्ट भएर धेरै निस्किएको छ भने त्यसलाई केहीउपचार गर्नुपर्दैन । तर ग्यान्टले नै बढी बनाएको छ भने त्यसलाई रोक्नउपचार गर्न सकिन्छ’ । थाइरोइड स्क्यानभन्नेले कुनचाँहीप्रकारको थाइरोइड हो पत्ता लगाउँछ त्यहीअनुसार उपचार गरिने उनी बताउँछन ।
मान्छेमाखाना रुचीनहुने, तैपनि रुचीमोटाउँदै जाने, डिप्रेसन हुने, अत्याधिकथकानहुनु, कपालझर्नु, कोलोष्टोरल बढनु, महिनावारी गडबढ हुनु, बाँझोपनाहुने,खुट्टा सुन्निनु,अत्याधिकदिशालाग्नु, घाँटी सुख्खाहुनु, मुटुको चाल बढनु,शरिर झमझमगनु, अल्छी हुने, धेरै कामगर्न मन नलाग्ने,महिलाहरुको महिलाहरुको बेला धेरै रगत बग्नु,जाडो सिजनमा छालाहरु बढी फुट्ने आदि यस रोगकामुख्य लक्ष्यण भएको डा दिपेन्द्र बताउँछन ।
थाइरोइडको समयमै उपचार नभए के हुन्छ ?
शरीरको सबै अंगचलाउने हर्मोनको कन्ट्रोल यसले गर्ने भएकोले सबै सिस्टममा पछी यसले असर गर्ने डा कार्की बताउँछन । भन्छन् ‘यसको असरको रुपमा नराम्राखालका डिजिजहरु देखा पर्न सक्छन ’। तर समयमायसको पहिचानभयो र सप्लीमेन्ट औषधीहरु हामीले गर्न सक्यौ भने त्यसले शरीरलाई धेरै फाइदापुग्ने बउनी बताउँछन ।
थाइरोइड रोगीले के खाने के नखाने
यस रोगमाखासै केहीवारिरहनु पर्ने चीजनभएको डा दिपेन्द्र बताउँछन । तर बन्दाकोभीहरु,मुला, सलादआदिखायो भने थाइरोइड रोक्ने तत्वहरु ह्ुन्छ भन्ने पनिछ । तर यस रोगीको लागि यो वात्यो खानुस् नखानुस् हामीभन्दैनौ ।
मधुमेह के हो ?
डा दिपेन्द्रका भन्छन्‘रगतमाचिनीको मात्रा बढी भयो भने त्यसले शरिरमानकारात्मक असरहरु देखाउँछ । जसलाई मधुमेह भनिन्छ’ । मधुमेह रोग शरिरमा एउटा पेनक्रियाजग्रन्थीहुन्छ त्यसले इन्सुलिन बनाउँछ । इन्सुलीनको कामखानाखाइसकेपछी खाएको कुरा रगतमा परिणत गर्ने हुन्छ ग्लुकोजलाई युज गर्छ । इन्सुलिनको कामत्यो ग्युकोजलाई हरेक कोशिकाले इर्नजीको रुपमालिन मद्धत गर्छ । मधुमेह भन्ने रोगमाकि त इन्सुलिननर्मर्ली रुपमै बनिरहेको हुन्छ कि त कम बनाउँछ । त्यो आधारमादुइप्रकारका डाइभिटिज भन्छौ हामी ।पहिलोमाकिप्यानक्राजले थोरै मात्रामा इन्सुलिन बनाउँछ । या त बनाउँदै बनाउँदैन । जसले गर्दा शरीरले ग्युकोज प्रयोग गर्न सक्दैन । त्यसकारण त्यो समस्या देखा पर्दछ । दोश्रोमाखालको डाइभिटिजमा शरीरले इन्सुलिन बनाउँछ । तर इन्सुलिन शरीरले प्रयोग गर्नसकिरहेको हुदैन ।त्यसलाई जेष्टेस्टनल डाइभिटिज भनिने उनी बताउँछन । यो विशेषगरी गर्भ अवस्थामाहुने डा दिपेन्द्र बताउँछन ।
मधुमेहभएको कसरी थाहापाउने ?
सामान्यतया धेरै तिर्खा लाग्नु, धेरै खान मन लाग्नु,पिसाव बढी लाग्नु, कमजोरी आलस्य र थकान महसुस हुनु, घाउचोट निको हुन धेरै समय लाग्नु, दृष्टि धमिलो हुने र हातगोडा पोल्ने, मान्छेमा अरु रोगनभएपनितौल घटदै जानेलगायत लक्षण देखिए डाइभिटिज भएको हुनसक्छ ।
मधुमेह र अन्य रोगबीच सम्बन्ध
अरु रोगसँगमधुमेहको सम्बन्ध हुन्छ भन्ने हुदैन । तर डाइभिटिज रोगसँग–सँगै अरु रोगहरु पनिभएबढी नकारात्मक असरहुनसक्ने डा दिपेन्द्र बताउँछन । डाइभिजिट पुरै सञ्चो भैहाल्ने रोग नभएको पनिदिपेन्द्रले बताए । यसलाइऔषधीखाएर वा इन्सुलिनलिएर कन्ट्रोलमा राख्न सकिने उनले बताए । औषधीखाने अनिनिको हुन्छ र छाड्ने भन्ने चाँही सामान्यतयाहुदैनउनले भने ।
मधुमेहको उपचार पद्धती
डाइभिटिज टाइप वान र टु भन्ने छ । टाइपवानजसको इन्सुलिन नै बन्दैन । त्यसको उपचार पद्धती भनेको हामीले इन्सुलिनदिनुपर्ने डा दिपेन्द्रले बताए । टाइ टु डाइभिटिज भनेको सामान्यतयाचालिस बर्ष भन्दा पछिको मान्छेलाइलाग्ने गर्दछ । यसमा मुखबाट खाने ट्यालेट दिनुपर्छ कि इन्सुलिनदिनुप¥यो ।
विरामीहरुलाई सुगर अथवाचिनी रोग भनेर डराउनु पर्ने र एकदमै नराम्रो असर गर्छ भन्ने जुनजनमानसमा डर फैलिएको छ । त्यो सत्य भएको डा दिपेन्द्र बताउँछन । तर यसले विस्तारै गरेर असर गर्ने उनी बताउँछन । त्यहीभएर आफुलाई लक्ष्यण देखिएको खण्डमा तुरुन्तै उपचार गराउनुपर्ने उनी बताउँछन । गोसाइकुण्ड स्वास्थ्य केन्द्रमाकार्यरत उनी सो सस्थामाआउने सबै विमारीकालागि सहज परामर्श र उपचारको लागि सदैव सहयोग गर्न तत्पर रहेकोपनिजानकारी गर्दछन् ।
© 2015 गोसाइकुण्ड स्वास्थ्य सेवा केन्द्र प्रा.लि. All Rights Reserved.